paññā – Dhammadīpa
Tag Archives: paññā
Posted on 23 Mar 2019 by Ashin Sopāka
“This world is blind, few here have true
insight, as few go to heaven
as birds escape from tangled net.
“Geese go through the path of the sky
the accomplished through firmament,
the wise are led out of the world,
post conquering Māra and his host.” – Dhp 174, 175
“Andhabhūto ayaṁ loko,
sakunto jālamutto va
appo saggāya gacchati.
ākāse yanti iddhiyā,
nīyanti dhīrā lokamhā,
jetvā Māraṁ savāhanaṁ.”
ဤလူအပေါင်းသည် (ပညာမျက်စိမရှိသဖြင့်) အကန်းအတိသာ ဖြစ်၏။ ဤလောက၌ အနည်းငယ်မျှသောသူသည်သာ (အနိစ္စ စသော သဘောအားဖြင့်) ရှုမြင်နိုင်၏။ ပိုက်ကွန်မှ လွတ်သော ငှက်သည် နည်းပါးသကဲ့သို့ လူအနည်းငယ်မျှသာ နတ်ရွာနိဗ္ဗာန်သို့ ရောက်နိုင်၏။
ဟင်္သာတို့သည် နေမင်းလမ်းကြောင်း ကောင်းကင်ခရီး၌ သွားကုန်၏။ တန်ခိုးရှင်တို့သည် ကောင်းကင်၌ သွားကုန်၏။ ပညာရှိတို့သည် စစ်သည် ဗိုလ်ပါနှင့် တကွသော မာရ်မင်းကို အောင်၍ လောကမှ ထွက်မြောက်ကုန်၏။
“Ðời này thật mù quáng,
Top: White Bellied Sea Eagle
©Ashin Sopāka 2019
* Pardon the lousy photography; capturing birds in flight isareal challenge
Posted in Dhamma	| Tagged dhamma, paññā, wisdom
In Praise of Sariputta
Posted on 16 Mar 2019 by Ashin Sopāka
“Deep in wisdom, intelligent,
Skilled in the true path and the false,
Sariputta, of great wisdom,
Teaches the Dhamma to the bhikkhus.
“He teaches briefly,
He speaks in detail.
His voice, like that ofamyna bird,
Pours forth inspired discourse.
“As he teaches them, they listen
To his sweet utterance.
Uplifted in mind, made joyful
By his delightful voice,
Sonorous and lovely,
The bhikkhus incline their ears.” – SN 8.6
dhammaṁ deseti bhikkhunaṁ.
“Tassa taṁ desayantassa,
suṇanti madhuraṁ giraṁ;
sotaṁ odhenti bhikkhavo”ti.
“နက်နဲသော ပညာရှိတော်မူသော၊ အကျိုးအကြောင်းကို သိသော ပညာလည်း ရှိတော်မူသော၊ အကြောင်းဟုတ်သည် မဟုတ်သည်တို့၌ လိမ္မာတော်မူပြီးသော၊ ကြီးမြတ်သော ပညာလည်း ရှိတော်မူသော သာရိပုတ္တရာသည် ရဟန်းတို့အား တရားကို ဟောတော်မူ၏။
သာရိပုတ္တရာသည် ‘သာလိကာမ၏ (သာယာ) ကြွေးကြော်သံကဲ့သို့’ သစ္စာလေးပါး တရားကို အကျဉ်းအားဖြင့်လည်း ဟောတော်မူ၏၊ အကျယ်အားဖြင့်လည်း ဟော တော်မူ၏၊ ပညာကို ထုတ်ဆောင်တော်မူပြီ။
ရဟန်းတို့သည် ထိုတရားကို ဟောသော အသျှင်သာရိပုတ္တရာ၏ သာယာသော အသံကို နာကြားရကုန်၏၊ တပ်မက်ဖွယ်ရှိသော နာပျော်ဖွယ်ရှိသော သာယာသော အသံကြောင့် တက်ကြွသော စိတ်ရှိကြကုန်သည် ဝမ်းမြောက်သော စိတ်ရှိကြကုန် သည် ဖြစ်၍ နားစိုက်ထောင်ကုန်၏။”
“Trí tuệ thâm, trí giải,
Này các vị Tỷ-kheo.”
Top: White Vented Myna
Bottom: Common Myna
Posted in Dhamma	| Tagged dhamma, myna, paññā, sariputta, wisdom
Posted on3Feb 2018 by Ashin Sopāka
“Seeing thus, bhikkhus, the instructed noble disciple experiences revulsion towards form, revulsion towards feeling, revulsion towards perception, revulsion towards volitional formations, revulsion towards consciousness. Experiencing revulsion, he becomes dispassionate. Through dispassion his mind is liberated. When it is liberated there comes the knowledge: ‘It’s liberated.’ He understands: ‘Destroyed is birth, the holy life has been lived, what had to be done has been done, there is no more for this state of being.’” – SN 22.95
“Seyyathāpi, bhikkhave, māyākāro vā māyā­kāran­tevāsī vā catumahāpathe māyaṁ vidaṁseyya. Tamenaṁ cakkhumā puriso passeyya nijjhāyeyya yoniso upaparikkheyya. Tassa taṁ passato nijjhāyato yoniso upaparikkhato rittakaññeva khāyeyya, tucchakaññeva khāyeyya, asārakaññeva khāyeyya. Kiñhi siyā, bhikkhave, māyāya sāro? Evameva kho, bhikkhave, yaṁ kiñci viññāṇaṁ atītā­nāgata­pac­cup­pan­naṁ … pe … yaṁ dūre santike vā, taṁ bhikkhu passati nijjhāyati yoniso upaparikkhati. Tassa taṁ passato nijjhāyato yoniso upaparikkhato rittakaññeva khāyati, tucchakaññeva khāyati, asārakaññeva khāyati. Kiñhi siyā, bhikkhave, viññāṇe sāro?
“Evaṁ passaṁ, bhikkhave, sutavā ariyasāvako rūpasmimpi nibbindati, vedanāyapi … saññāyapi … saṅkhāresupi … viññāṇasmimpi nibbindati. Nibbindaṁ virajjati; virāgā vimuccati. Vimuttasmiṁ vimuttamiti ñāṇaṁ hoti … pe … nāparaṁ itthattāyāti pajānāti”.
ရဟန်းတို့ ဥပမာသော်ကား မျက်လှည့်သမားဖြစ်စေ၊ မျက်လှည့်သမား၏ တပည့်ဖြစ်စေ လမ်းဆုံလမ်းမ၌ မျက်လှည့်ပြရာ၏၊ ထိုမျက်လှည့်ကို မျက်စိအမြင်ရှိသော ယောကျာ်းသည် ကြည့်ရာ၏၊ တစိမ့်စိမ့်ရှုရာ၏၊ အသင့်အားဖြင့် ဆင်ခြင်ရာ၏၊ ထိုယောကျာ်းသည် ကြည့်နေစဉ် တစိမ့်စိမ့် ရှုနေစဉ်အသင့်အားဖြင့် ဆင်ခြင်နေစဉ် ထိုမျက်လှည့်သည် အသုံးမဝင်ဟူ၍ သာ ထင်ရာ၏၊ အချည်းနှီးဟူ၍ သာထင်ရာ၏၊ အနှစ်မဲ့ ဟူ၍ သာ ထင်ရာ၏။ ရဟန်းတို့ မျက်လှည့်၌ အနှစ်ဟူ၍ အဘယ်မှာ ရှိနိုင်မည်နည်း။ ရဟန်းတို့ ဤအတူပင် အတိတ် အနာဂတ် ပစ္စုပ္ပန်လည်းဖြစ်သော။ပ။ အဝေး အနီးလည်းဖြစ်သော ဝိညာဏ်အားလုံးကို ရဟန်းသည် ကြည့်၏၊ တစိမ့်စိမ့် ရှု၏၊ အသင့်အားဖြင့် ဆင်ခြင်၏။ ထိုရဟန်းသည့်ကြည့်နေစဉ် တစိမ့်စိမ့် ရှုနေစဉ် အသင့်အားဖြင့် ဆင်ခြင်နေစဉ် အသုံးမဝင်ဟူ၍ သာ ထင်ရာ၏၊ အချည်းနှီး ဟူ၍ သာ ထင်ရာ၏၊ အနှစ်မဲ့ဟူ၍ သာ ထင်ရာ၏။ ရဟန်းတို့ ဝိညာဏ်၌ အနှစ်ဟူ၍ အဘယ်မှာ ရှိနိုင်မည် နည်း။
ရဟန်းတို့ ဤသို့ မြင်သော အကြားအမြင်ရှိသော အရိယာတပည့်သည် ရုပ်၌လည်း ငြီးငွေ့၏၊ ဝေဒနာ၌လည်း ငြီးငွေ့၏၊ သညာ၌လည်း ငြီးငွေ့၏၊ သင်္ခါရတို့၌လည်း ငြီးငွေ့၏၊ ဝိညာဏ်၌လည်းငြီးငွေ့၏၊ ငြီးငွေ့သော် စွဲမက်မှု ကင်း၏၊ စွဲမက်မှု ကင်းခြင်းကြောင့် ကိလေသာမှ လွတ်မြောက်၏၊ ကိလေသာမှ လွတ်မြောက်သော် “လွတ်မြောက်ပြီ”ဟု အသိဉာဏ်သည် ဖြစ်၏။ပ။ ဤမဂ်ကိစ္စအလို့ငှါတစ်ပါးသော ပြုဖွယ် မရှိတော့ပြီဟု သိ၏။
“Ví như, này các Tỷ-kheo, một ảo thuật sư hay đệ tử một ảo thuật sư, tại ngã tư đường bày trò ảo thuật. Một người có mắt nhìn chuyên chú, như lý quán sát trò ảo thuật ấy. Do người ấy nhìn chuyên chú, như lý quán sát, ảo thuật ấy hiện rõ ra là trống không, hiện rõ ra là trống rỗng, hiện rõ ra là không có lõi cứng. Làm sao, này các Tỷ-kheo, lại có lõi cứng trong ảo thuật được? Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, phàm thức gì thuộc quá khứ, vị lai, hiện tại … hoặc xa hay gần; Tỷ-kheo nhìn chuyên chú, như lý quán sát, thức ấy hiện rõ ra là trống không, hiện rõ ra là trống rỗng, hiện rõ ra là không có lõi cây. Làm sao, này các Tỷ-kheo, lại có lõi cây trong thức được?
“Thấy vậy, này các Tỷ-kheo, vị Ða văn Thánh đệ tử nhàm chán đối với sắc … đối với thọ … đối với tưởng … đối với các hành … nhàm chán đối với thức. Do nhàm chán, vị ấy ly tham. Do ly tham, vị ấy giải thoát. Trong sự giải thoát, trí khởi lên: “Ta đã giải thoát … không còn trở lui trạng thái này nữa”. Vị ấy biết rõ như vậy.”
Posted in Dhamma	| Tagged bubble, consciousness, dhamma, paññā, wisdom